Fitetezana orinasa - CSPower
CSPower Facotry: Famokarana feno avy amin'ny fitaovana Lead mankany amin'ny bateria vita.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 18 taona, teknolojia avo lenta sy fitaovana, CSPower dia manokan-tena amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny famokarana bateria asidra firaka avo lenta ho an'ny tsena isan-karazany ao anatin'izany ny Solar, UPS, Telecom, Electricity, sns. ny marika manokana "CSpower" sy "CSBattery" na amin'ny orinasa OEM.
Ao amin'ny valan-javaboary indostrialy maoderina mirefy 50,000 metatra toradroa any Guangdong, Shina, ny trano fonenan'ny CSPOWER dia mamokatra 2kk KVAh eo ho eo isan-taona, mba hamoronana mihoatra ny 130 tapitrisa dolara amerikana isan-taona.
Famokarana Lead Plate
Masinina Fitsapana Batterie
OPzV Battery Charging
Fitaovana ao amin'ny Warehosue
Battery Silk Screen Printing
Batterie ao amin'ny trano fanatobiana entana
Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie cellule solaire Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie 12v 7ah azo averina Batterie tsy misy fikojakojana Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro